Saxeexyada KONYARAY Khadka Jaan-gooyada ayaa la saxeexay ..! Marka Sidee Wadada Loo Marayaa | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia42 KonyaSaxeexyada KONYARAY Khadka Jaan-gooyada ayaa la saxeexay ..! Marka sidee wadadu noqon doontaa
21 / 02 / 2020 42 Konya, Gobolka Central Anatolia, Tareenka Tareenka, tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, TURKEY
Saxeexyada ayaa loo saxeexay xariiqa magaalada konyaray, sidee jidku ahaan doonaa
Munaasabadda saxiixa ah ee KONYARAY Commuter Line Project, oo lagu xaqiijin doono iskaashiga degmada Konya Metropolitan Municipal TCDD iyo agaasime waaxeed ayaa la qabtay.
Isaga oo ka hadlayey xaflada lagu qabtay Xarunta Dhaqanka ee Magaalada Mevlana, Duqa Magaalada Konyapolitan Uğur İbrahim Altay wuxuu sheegay inay maalin muhiim ah u leeyihiin taariikhda Konya. Isagoo og in dhibaatada ugu weyn ee magaalooyinka waaweyni ay tahay taraafikada, ayuu Duqa Magaalada Altay yiri, “Konya ma ahan xaalad abuureysa qalalaase marka loo eego cufnaanta taraafikada xilligan. Waxaan ku jirnaa meel wanaagsan marka loo eego qiimeynta ay sameeyeen ururo badan oo caalami ah. Laakiin Konya si dhakhso leh ayuu u kobcayaa. Waxaan xaqiiqsaneynaa mashaariic aad muhiim u ah waqtigan si aan u qaadno tallaabooyinka lagama maarmaanka ah. Iminka, goobta dhismaha ee Konya Metro ayaa la soo gabagabeyn doonaa. Waxaan rajeyneynaa, dhismaha ayaa bilaaban doona sanadkaan. Iyada oo la adeegsanayo mitrooga, oo muhiim u ah soo celinta Konya, Konya sidoo kale waxay lahaan doontaa maqaamka magaalooyinka leh metro. ”
Heerka koowaad ee 'BATTERY 17.4 KILOMETERS, TOTAL 26 KILOMETERS'
Isaga oo ogsoon in mashruuca KONYARAY uu yahay maalgashi aad muhiim u ah, ayuu Madaxweyne Altay yiri, “Sababtoo ah waxaan bilownay inaan rakaab ku qaadno wado ay dadku rakaab ka yihiin magaalada laakiin majiraan jid gooyo gaadiid dadweyne. Mashruucu wuxuu ka kooban yahay laba marxaladood. Marxaladda koowaad waa Saldhigga tareenka ee Konya iyo garoonka diyaaradaha 17.4 kiiloomitir; Warshadahayada iyo warshadaha abaabulan ee Meram, Karatay iyo Selçuklu waxay gaari doonaan gaadiid aan kala go 'lahayn oo xasilan, xitaa marxaladda labaad, laga bilaabo Yaylapınar ilaa aagga Wershadaha Abaabullaha. Tani waxay ahayd mashruuc laga wada hadlay sannado, waxayna ahayd mid dhab ah ilaa maanta. Waxaan u mahadcelinayaa maamulaheena guud ee TCDD, oo si weyn wax ugu biiriyay mashruuca. ”
KONYA KA HELI KARA 4 65 KILOMETERS SIYAASAHA SIYAASAHA CIIDAMADA LAGU GUDO XNUMX SANO
Kadib markii uu dhammeystiray mashaariicdan, Madaxweyne Altay wuxuu sii waday khudbadiisa isagoo ku nuux nuuxsaday in Konya ay lahaan doonto 21.1 kilomitir mitir mitir iyo 26 Km oo kuyaal magaalada. Markay dhammaystiraan, afarta sano gudahood, Konya waxay lahaan doontaa 16 kiiloomitir oo qadka tareenka cusub. Tani waa qiyaastii laba iyo badh khadka aan maanta isticmaalno. ”
AIRPORT KONYA AYAA KU XIRAN NIDAAMKA RAIILKA
Isaga oo ogaysiinaya in mashruuca khadka tareenka ee magaaladu uu wax weyn ku soo kordhin doono Konya meeshiisa iyo wadooyinkiisa, ayuu Madaxweyne Altay sii watay: “Xaqiiqdii, waxaan samaynaynaa ganacsi heerkiisu sareeyo inkasta oo qiimaha maalgashigu uusan u badnayn sida metrooga. Muddo sanado ah, waxaan u qabanay muwaadiniinteena mashruucyo kala duwan sidii ay u gaari lahaayeen gaadiidka dadweynaha ee aagga Wershadaha abaabulan, laakiin maanta waxaan saxeexaynaa markii ugu horeysay. Markaa, waa laga xoreyn doonaa cufnaanta taraafikada ee ku dhawaad ​​2.600 oo gawaarida adeegga ah. Waxaan sidoo kale bixinnaa gaadiid isku-dhafan oo loogu talaggaley Wadooyinka Gaadiidka ee Konya, oo ah muuqaal KONYARAY. Waxaa lagu rakibi doonaa nidaamka isku-xidhka khadkeena metrooga ee labadaba xaafada degmada Meram iyo Saldhigga Tareenka ee Xawaaraha Sare. Markaa, muwaadiniinteenu waxay heli doonaan fursad ay ku isticmaalaan taraamkeena, metro-ka iyo KONYARAY iyagoo hal meel u tagaya meel kale. Waxaan rajeyneynaa, waxaan qorsheyneynaa inaan bilowno geedi socodka hindisada la xiriira sanadkaan. 17.4 kiiloomitir ka dibna 26 kiiloomitir ayaa sida ugu dhakhsaha badan loo dhammeystiri doonaa. Iibsiga Gawaarida waxaa fuliya Dawlada Hoose ee Magaalaga. Waxaan rajeyneynaa inaan shaqadiisa bilaabi doonno sanadkaan. Intaa waxaa u dheer, muujinta kale ee mashruucan ayaa ah in aan ku xiriirnay Airport-ka Konya nidaamka tareenka markii ugu horeysay. Ilaa hada, maddaarka iyo nidaamka tareenka ma aysan joogin goobta gaadiidka dadweynaha. Markaa, garoonka diyaaradaha, saldhigayaga cusub ee baska, dhismaha saldhiggeenna cusub iyo dhismaha saldhiggeenna hore waxay noqon doonaan nidaam isku-dhafan. Halkan, waxaan u soo bandhigeynaa mahadnaq aan dhamaad laheyn Mudane Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Mudane Madaxweyne had iyo jeer waa uu daneeyaa Konya wuxuuna nagu taageeraa tilmaamaha uu ku bixiyo fulinta mashaariicdan. Anaga, Konya ahaan, marwalba waxaan garab taaganahay Madaxweynahayaga, waxaana rajeyneyaa inaan sidaas ku sii wadno. Mar labaad, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Mehmet Cahit Turhan, wasiiradeenna, gudoomiyaasha, kuxigeenada, gudoomiye kuxigeenka, gudoomiyaha gobolka, badhasaabada, si wada jir ah, waxay si adag ugu shaqeynayaan inay u adeegaan Konya. Midnimadan iyo wadajirka Konya sidoo kale waxay horseed u tahay xaqiijinta mashaariic badan. Waxaan rajeynayaa inay faa iido ugu jirto magaaladeena. ”
KONYA waxay ku nooshahay da'da weyn ee gadiidka
Duqa magaalada Karatay Hasan Kılca wuxuu sheegay in jidadka metrooga iyo hareeraheeda ay aad muhiim ugu yihiin Konya wuxuuna intaas raaciyay, “Ayadoo intaas la raacayo, Degmadeena Caasimaddu waxay qaadataa wadada tareenka ilaa Isbitaalka Magaalada iyo Wadada Barış, iyo tillaabooyinka lagu gaari karo gaadiidyada sida Sultan Abdülhamid Han, İsmail Ketenci iyo Celaleddin Karatay. nolosha ku tuuraya da'da dahabiga ah ee gaadiidka magaaladeena. Dareen ahaan, waxaan u mahadcelinayaa qof walba oo gacan ka gaystay. ”
Duqa Magaalada Meram Mustafa Kavuş wuxuu yidhi, Waxaan ku faraxsanahay kuna faraxsanahay magaaladayda iyo degmaddayda. Waxaan marka hore la kulanay metrooga. Metro waxay dardargelin doontaa isbadalka magaalada halkii ay ka isticmaali lahayd gaadiid keliya. Tani waa mashruuc noo furi doona jidkeena. Qadka cusub ee xaafadaha ayaa sidoo kale qaadi doona tiro badan oo dad ah oo ka socda Meram waxayna u noqon doontaa xasillooni weyn taraafikada. Mashaariicda magaalooyinka iyo hareeraheeda waxay sidoo kale wax weyn ka tari doonaan horumarka magaaladeena iyo degmadaba. ”
Duqa Seljuk Ahmet Pekyatırmacı wuxuu yidhi, “Konyaheena waxay helaysaa maalgashi ay mudan tahay. Konya waa magaalada ugu horreysa ee nidaamka tareenka la xiriira ee gaadiidka laga adeegsado Anatolia. Waxaan rajeynayaa mudadan; Iyada oo la maalgashanaayo khadka maalgashiga metro, maalgashiga tareenka, maalgashiga KONYARAY, nidaamka tareenka wuxuu noqon doonaa magaalada ugu caansan Anatolia. Aad ayaan ugu faraxsanahay taas. Waxaan rajeynayaa in markii maalgashiyadan la soo gabagabeeyo, heerka iyo heerka Konya eeyaga lagu kordhin doono magaalooyinka. ”
BANLİYÖ LINE wuxuu u adeegi doonaa 90 kun oo khaaliyaal ah
Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun ayaa yidhi, Khadadka magaalada hareeraheeda ah waxaa lagu dhex dari doonaa khadadka nidaamka tareenka magaalada waxayna bixin doonaan dhaqso, badbaado iyo gaadiid badan oo la awoodi karo. Aagga ay xireyso gaadiidka dad weynaha ayaa ballaarin doona. Taageerada nidaamka tareenka fudud, kaas oo dhowaan lagu xoojiyay khadad cusub iyo gaadiid cusub, oo leh khadadka hareeraha magaalooyinka ayaa fududeyn doona nolol maalmeedka dadkayaga Konya xitaa ka sii fudud. KONYARAY, oo aan iskaashi la samayno Dawladda Hoose ee Magaaladda, ayaa ah mid ka mid ah mashaariicda ugu muhiimsan ee gaadiid ee aan la kaashan doonno dawladaha hoose. Mashruuca, wajiga koowaad oo ah 17.4 kiiloomitir wuxuuna lahaan doonaa dherer gaaraya 26 kiiloomitir markii la dhammeeyo, safarka 1-saac ee socodku wuxuu ku yaraan doonaa 30 daqiiqo. Waxay u adeegi doontaa 90 kun oo rakaab maalin walba. Waxaan ballan qaadaynaa annaga oo ah TCDD, in aan ku bixin doonno dhammaan noocyada taageerada mashruucan quruxda badan waxaanan ka shaqeyn doonnaa habeen iyo maalinba sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah.
Isagoo sheegay inuu la kulmay Tareenka Sare ee Xawaaraha Sanadkii 2011 isagoo hogaaminaya Madaxweynaha Konya Mudane Recep Tayyip Erdoğan iyo dhismaha Xarunta Saadka ee Kayacık, Uygun, carwada saddexaad ee tareenka ugu weyn adduunka, "Eurasia Rail" bishii Maarso 2021, oo ay weheliso Dowlada Hoose ee Magaalada Konya. xusuusiyay inay abaabuli doonaan.
Mashruuc xiiso badan
Kuxigeenka AK Party Konya Ziya Altunyaldız ayaa tiri, “Waxaan ilaahay ugu mahad naqayaa dowladdeena AK Party, runtii waxaan sameyneynaa waxyaabo ka baxsan riyooyinkeena. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Madaxweynaheenna, oo adeegyadan ku bixiyay dhammaan taageeradiisa iyo aaminsanaanta Konya. Aad ayaan u farxay markaan arkay mashruuca. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo Duqa Magaalada iyo Maareeyaha Guud TCDD dareenka ay ka qabaan mashruuca. ”
"Kuwani waa shaqooyin culus"
Guddoomiyaha Konya Cüneyit Orhan Toprak ayaa yidhi, “Waxaan rumeysanahay in mashruuca miyigu uu wax weyn ka tari doono magaaladeena. Konya runtii waxay horumar la yaab leh ku talaabsatay gaadiidka sannadihii ugu dambeeyay. Gaar ahaan Tareenka Xawaaraha Sare. Tareenka Xawaaraha Sare ayaa hada ah nooc ka doorbidida gaadiidka diyaaradda. Konya waxay noqotay xarunta maalgelinta nidaamka tareenka. Mashruuca reer magaalka sidoo kale waa mashruuc aad u weyn. Waxaan goob joog ka ahaa sida Madaxweynaha si dhow ula socdo mashruuca arintan iyo sida uu ugu adkaystay.
Isagoo ogaysiiyaya in khadka magaalada ku xeeran uu yahay maalgashi qiimo u leh sida mitrooga, ayuu taliye Toprak yiri, “Xiriirka xaafadaha ku teedsan garoonka diyaaradaha aad bey muhiim u yihiin. Waxyaabahan runtii waxay u shaqeeyaan sidii riyooyin. Madaxweynaheenu wuxuu leeyahay dadaalo iyo taageero weyn bilowga, dayactirka iyo dhameystirka maalgashiga weyn ee Konya. Aad ayaan ugu mahad naqayaa. ”
Khudbadihii kadib, waxaa la saxeexday hab-raaca jidka magaalada hareeraha ah ee udhaxeeya Duqa Magaalada Konya ee Uğur İbrahim Altay iyo Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun.
barnaamijka; Kuxigeenka AK Party Konya Orhan Erdem, Guutada 3aad ee Jet Base iyo Taliyaha Garrison Brigadier General Fidan Yüksel, Xeer ilaaliyaha Guud Ramazan Solmaz, Taliyaha Gobolka Gendarmerie Brigadier General Şakir Uslu, Taliyaha Booliska Gobolka Mustafa Mustafa Aydın, AK Xisbiga Konya ee Gobolka Woqooyi Hasan Angı, MHP Provincial Kara Rem Madaxweynaha Konya ee Warshadaha Memiş Kütükcü, Madaxweynaha isweydaarsiga badeecadaha Konya Hüseyin Çevik, Konya Rugta Ganacsadayaasha iyo Kusimaha Madaxweynaha Muharrem Karabacak, MÜSİAD Konya Madaxweynaha laanta Ömer Faruk Okka, badhasaabyada degmada, madaxweynayaasha muhtar madaxweynayaal iyo muwaadiniin fara badan ayaa ka qeybgalay.
Khadadka Gaadiidka waaweyn ee Konya
Maalgelinta nidaamka tareenka Konya
KONYARAY Wadada Laamiga
KONYARAY wuu joogsanayaa